Banking | Pay Casino by Phone oo More! |
Bixi by Phone Bill Games iyo More at Coinfalls Casino…
Banking at Casino Phone The
Oo waxaannu idin keenaynaa jawi aad u nabdoon oo ay ku shubto iyo noqoto lacagta at CoinFalls Mobile Phone Casino. Waxaan la hubiyo in dhammaan macluumaadka maaliyadeed in aanu dhamaystirno waa lo, oo loo soo diray via la xidhiidha ammaan ah oo lagu kaydiyaa on server our aamin.
Waxaad arki kartaa hoos ku qoran warbixin kooban oo ku deposit iyo casino telefoonka fursadaha fudud oo degdeg bixitaanka aan hadda bixiyaan iyo xaddi yar iyo macaamil ganacsi ugu badnaan iyo jeer processing.
deposit by Mobile Phone Casino iyo Tablet Options – More joogto Added!
Visa Credit £ 10 £ 2500 maalin kasta
Visa Debit £ 10 £ 2500 maalin kasta
Visa Electron £ 10 £ 2500 maalin kasta
MasterCard £ 10 £ 2500 maalin kasta
Maestro £ 10 £ 2500 maalin kasta
Ukash £ 10 £ isbaddalaa hadba halkii marba
PayPal Imaatinka ugu dhakhsaha badan Imaatinka ugu dhakhsaha badan
Skrill Eeg magalka Eeg magalka
Billing Mobile £ 10 £ 30 maalintiiba
Baxaan BY PHONE Casino!
Visa Credit £ 10 / £ 20,000 toddobaadkii 2-3 maalmood oo shaqo
Visa Debit £ 10 / £ 20,000 toddobaadkii 2-3 maalmood oo shaqo
Visa Electron £ 10 / £ 20,000 toddobaadkii 2-3 maalmood oo shaqo
MasterCard £ 10 / £ 20,000 toddobaadkii 2-3 maalmood oo shaqo
Ukash £ 10 £ kala duwanyihiin Account
Skrill Imaatinka ugu dhakhsaha badan Imaatinka ugu dhakhsaha badan
Sidaas aad aragto, bangiyada ee Coinfalls Mobile Casino waa u fududahay markaad bixiso adiga oo isticmaalaya telefoonka.
3D aamin at Coinfalls Casino
format A caan ku ah sugida ee lacagta online waa 3D ama saddex Domain Secure. kaarka A helo password a qofka ka dhanka ah ay card ujeeddo ah samaynta lacagta. Shabakadaha taageera heerka this, sida Coinfalls Casino, waxay u baahan yihiin dadka isticmaala ay, raba inay ku shubi, in ay maraan habka this of sugida ka hor inta aysan si dhab ah ku shubi karaa lacag kasta. sugida Tani waxay xaqiijineysaa hab amaan ah macaamilka. Oo habka uu u baahan yahay in la sameeyo hal mar oo keliya kaadh. Taasi dhacaya lacagta qadaadiicda idiin!
Habka waa mid fudud. Ka hor inta macaamil ganacsi ugu horeysay, kaarka yeelan doonaan in ay saxiixdo. Waayo, in, waxay yeelan doonaan in ay soo geli faahfaahinta la xidhiidha kaadhka oo aad u sugay in ay bangiga. Marka lagu sameeyo, oo dhan macaamil ah in la raaco si fudud oo aan faahfaahin in la buuxiyaa si joogta ah kaarka isla.
Ciyaartoyda at Coinfalls Casino isticmaala mid ka mid ah kaararka soo socda si ay u sameeyaan kayd haatan yeelan doontaa in ay dhex maraan 3D feature ee Secure in la sameeyo kayd. The kaararka in waxaa loo baahan yahay in la raaco nidaamka this yihiin – Visa, Visa Debit, Visa Electron, MasterCard, Maestro, iyo Solo. Marka hore, lacagta la gudbin doonaa bangiga website ay card ee ammaan. Halkan, waxay yeelan doonaan in ay soo geli password ka aamin. Ka dib oo rumayn Kitaabihii password saxda ah, bogga xaqiijinta bangiga u muuqataa.
Qaar ka mid ah dadka isticmaala ka waaban inaad kaarka isticmaalaan kayd online iyo macaamil sababo ammaanka. Laakiin qaab this iyaga oo aan haysan wax laga walwalo in. Tani waa sidaas maxaa yeelay macluumaad kaarka aan la wadaago baayacmushtarka, kiiskan Coinfalls Casino. Faahfaahinta joogo qarsoodi ah oo u dhexeeya lacagta iyo bangiga. Sidaas, waxaa aad u amaan ah si ay u sameeyaan lacagta iyo lacag dhigaal ah ee format this, isticmaalaya debit ama credit cards.
Iyadoo in ka yar 1% fursadaha fashilaad macaamil ganacsi, Sidaas oo ay kayd dhab ah iyo lacagta waa korodhsi caan. Waxaa hal mar oo keliya in kaarka u baahan yahay ilaa saxiixa iyo sugee geedi dheer. Laakiin intaas ka dib, macaamil ganacsi kasta u baahan tahay oo kaliya password gaar ah u abuuray, taas aawadeed oo keliya. Sidaas, samaynta kayd on Coinfalls Casino hadda waa ka sii amaan badan ka hor.